3 Ụdị ihe ahụ mere mgbe ihe dị ka otu puku afọ na narị afọ ise gara, ya bụ, n’oge Pọl onyeozi. N’oge ahụ, ụfọdụ ndị sịrị na ha bụ Ndị Kraịst malitere izi ozizi ụgha. Ma, ha ka nọ n’ọgbakọ. Ọ bụrụ na mmadụ elerughị anya, o nwere ike iche na o nweghị ihe dị iche ná ndị ahụ na-ezi ozizi ụgha na ndị ọzọ nọ n’ọgbakọ. Ma, ihe ahụ ha na-akụzi nwere ike ịkpa okwukwe Ndị Kraịst aka ọjọọ. Ha dị ka anụ ọhịa wolf nke nwere oyiyi atụrụ. Ha “na-ekpukwa okwukwe nke ụfọdụ ndị ihu.” (2 Tim. 2:16-18) Ma, Jehova na-ahụ ihe na-emenụ. Obi siri Pọl ike na ọ gaghị agbachi nkịtị. Ihe nyeere ya aka bụ na ọ ma ihe Jehova mere Kora na ndị òtù ya mgbe ha nupụụrụ ya isi. N’ihi ya, ka anyị leba anya n’ihe Pọl gwara Timoti ma hụ ihe anyị nwere ike ịmụta na ya. “ABỤ M JEHOVA; ADỊGHỊ M AGBANWE AGBANWE”
mailto:?body=“Jehova Maara Ndị Bụ́ Ndị Ya”%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014523%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=“Jehova Maara Ndị Bụ́ Ndị Ya”